कल्पना पौडेल काठमाडौँ, २८ जेठ । के तपाईंलाई पिसाब छिटोछिटो लाग्ने, पोल्ने, पिसाब गर्दा धारा छुटने, मसिनो हुने धारा छुट्दा छरिएर जाने, अण्डकोष सुनिने, गनाउने, नाइटोमुनि दुख्ने, वीर्य खस्दा पोल्नेजस्ता समस्या छ ? माथि मध्येका कुनै पनि लक्षण जुनसुकै उमेरका पुरुषमा देखिएको छ भने एकपल्ट सोच्नैपर्छ कतै तपाईंलाई प्रोस्टेट ग्रन्थ..
हरेक दिन खाली पेटमा मनतातो पानीमा कागती निचोरेर पिउँदा निकै लाभदायक हुने विज्ञहर..
डण्डपाणि भट्टराई कुकुरका अध्येता सानैदेखि घरमै हुर्काएर आफैँले तालिम दिएको कुकुर..
सुजिता बस्नेत योग प्रशिक्षक गलत जीवनशैली, अनावश्यक तनाव र व्यायामको कमीका कारण ..
काठमाडाँै, २७ जेठ । हेल्थपोष्ट भवन र यसलाई सञ्चालन गर्न चाहिने उपकरण एवम् औजार र..
एजेन्सी जेठ २६ – विद्यालयमा पढाइएका केही कुरा मानिसहरुले जीवनभरी सही मानेर अनुसरण गर्ने गर्दछन् । यतिमात्र होइन, आउँदो पीढिलाई पनि मानिसहरुले त्यही हिसाबले ज्ञान बाँड्ने गर्दछन् । यस्तो अवस्थामा हामीलाई विद्यालयमा नै सिकाइएका केही कुराहरु गलत भए के होला ? १. बाँदरबाट मानिसहरुको उत्पत्ति भएको होइनः यो तस्बिरलाई तपाईं पनि आफ्नो स्..
चितवन, २५ जेठ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले यहाँको भरतपुर अस्पताललाई शैक्षिक प्रतिष्ठानसँगै अति विशिष्ट सेवासहितको एक हजार शै्ययाको शिक्षण अस्पतालका रुपमा विकासका लागि प्रस्तावित गुरुयोजना स्वीकृत गरेको छ । गुरुयोजना स्वीकृत भएपछि अस्पताल सञ्चालक समिति, चिकित्सक, कर्मचारी र जिल्लावासी उत्साहित भएका छन् । देशकै मध्यभागमा रहेकाले तराई र..
एजेन्सी जेठ २४ – यदि तपाईं बजारमा पाइने कुनै पनि औषधी वा तौल घटाउने उत्पादनको प्रयोग गरेर पेटको बोसो घटाउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने यी कुराको सेवनले तपाईंको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ । बजारमा पाइने धेरैजसो उत्पादनमा केमिकलको प्रयोग गरिएको हुन्छ जसले तपाईंको शरिरलाई फाइदाभन्दा बढि बेफाइदा पुर्याएको हुन्छ । यस्त..
ओन्ली माइ हेल्थ जेठ २३ – मकैमा शरिरको पोषणका लागि आवश्यक सबै प्रकारको मिनरल्स पाइन्छ । यो एउटा यस्तो पौष्टिक आहार हो जसको सेवन तपाईं जुनसुकै बेला पनि गर्नसक्नुहुन्छ । १. निकै फाइदाजनक छ मकैः मकै एउटा यस्तो स्वस्थ आहार हो जसलाई तपाईं बिहान, दिउँसो, बेलुका जतिबेला पनि खानसक्नुहुन्छ । शरिरमा जमेको अतिरिक्त बोसो अर्थात् […]
कल्पना पौडेल काठमाडौँ, २२ जेठ । बाथरोगबारे चर्चा गर्न र जनचेतना फैलाउने आवश्यक रहेको चिकित्सकले बताएका छन् । नेसनल बाथरोग सेन्टरको चौथो वार्षिकोत्वको अवसरमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा चिकित्सकले हातखुट्टा दुख्दा बाथ रोग हो भन्ने अनुमान गरे पनि कसरी लाग्छ, उपचार के हो भन्नेबारे अझै अनभिज्ञता रहेको बताएका थिए । बाथरोगले शरीरमा प्र..
गर्भावस्थासँग जोडिएका आठ वास्तविकता जसबारे कसैले कुरा गर्दैनन्
बीबीसी जेठ २२ – गर्भधारण कुनै पनि महिलाका लागि उनको जीवनको सबैभन्दा मिठो अनुभव हो । तर यसको सुन्दरतासँगै गर्भवती महिलाका केही यस्ता अनुभव पनि हुन्छन् जसबारे धेरैसँग कुरा गरिँदैन । १. दिसा कोइलाजस्तो कालो र ठोस् गर्भवती महिलाका अनुसार गर्भधारणको क्रममा कसैले पनि बताउँदैनन् कि उनीहरुको दिसा कोइलाजस्तो कालो र ठोस् हुन्छ । २. [&hell..
एजेन्सी जेठ २१ – हुन त पुरुषहरु महिलाको सुन्दरताका कारण नै आकर्षित हुने बताइन्छ । तर ज्योतिषलाई विश्वास गर्ने हो भने केही राशी भएका युवतीहरु आफ्नो सुन्दरता बिना नै कसैलाई रुझाउन सक्षम हुन्छन् । १२ राशीमध्ये चार राशी भएका युवतीहरुमा मात्र यस्तो प्रभाव हुन्छ जसले जुनसुकै पुरुषलाई उनीहरुतर्फ आकर्षित गर्न सक्छन् । मिथुन राशी भएका [..
एजेन्सी जेठ २० – चीना ग्रह नक्षत्रबाट व्यक्तिको स्वभावबारे थाहा हुन्छ । यतिमात्र होइन वैवाहिक जीवनभन्दा पहिले पनि साथीको चीनाबाट गुण मिलाइन्छ । साथीसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ती सबैकुरा चीनाबाट थाहा हुन्छ । हुन त यसबारे थाहा पाउन मुश्किल छैन कि कुन राशी भएका मानिसहरुले सजिलै सच्चा प्रेम पाउँछन् र कसले प्रेममा धोका पाउँछन् । [&helli..
चितवन, १९ जेठ – बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरमा आउँदो शैक्षिक सत्रबाट स्नातक तहमा अङ्कोलोजी विषयमा नर्सिङ पढाइ हुने भएको छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा विजयचन्द्र आचार्यकाअनुसार पोखरा विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा नेपालमै पहिलो पटक क्यान्सर विषयसँग केन्द्रीत हुनेगरी नर्सिङ पढाइ हुनेछ । तीन वर्षे अध्ययनका ..
एजेन्सी जेठ १९ – आरु गर्मी मौसमको निकै फाइदाजनक फल मानिन्छ । हल्का गुलियो यसको विशेषता त हो नै यसका साथै यसमा पाइने एन्जाइम, भिटामिन र फाइबर स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ । यसका बोक्रामा पनि धेरै मात्रामा भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छ । यसले आँखालाई स्वस्थ राख्नुका साथै यसले आँखाको ज्योती पनि बढाउँछ । आरुमा बिटा […]
दीपेन्द्र राई जतिसुकै सुन्दर भए पनि दाँत बिग्रेको छ भने मानिस कुरूप देखिन्छ । स्वस्थ दाँत मुस्कानको स्रोत मानिन्छ । सुन्दर मानिसको पहिलो प्राथमिकता दाँत पनि हो । त्यसो भए दाँतको हेरचाह कसरी गर्ने ? डेन्टल सर्जरी अस्पताल बेलायतमा कार्यरत डेन्टल नर्स लीला सेलिङ माबो सुझाउँछिन्, ‘मेटल होइन, इलेक्ट्रिक टुथ ब्रस, ओरब बी ब्रसले दाँत [..
कस्तो पहिरनमा कस्तो गहना सुहाउँछ ?
उत्तम बनेपाली फेसन डिजाइनर फेसनेबल तथा क्लासिक लुक्स देखिन ड्रेसअप मात्र नभएर गहनाको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । आफ्नो पहिरनसँग मिलाएर गहना लगाउन नजान्दा असुहाउँदो देखिन सक्छ । त्यसैले आफूसँग छ भन्दैमा भएभरको गहना लगाउनु पनि उपयुक्त हुँदैन । धेरै गहनाले ड्रेसअप नै असुहाउँदो तथा भद्दा देखाउँछ । गहना प्रयोग गर्दा आफूले लगाएको ड्..
ब्लड टेस्ट गर्नुअघि के गर्ने ?
पृथ्वीविक्रम खड्का ल्याब टेक्निसियन शुक्रराज सरुवा रोग अस्पताल रक्त परीक्षण गर्न अस्पताल वा ल्याबमा जाने क्रममा हतार गर्नु हुँदैन । केही समय आराम गरेर मात्र परीक्षण गर्ने रगत निकाल्नुपर्छ रोगको प्रकृतिअनुसार ब्लड टेस्ट गर्नुपर्छ । सोही टेस्टअनुसारको स्याम्पल कलेक्सन हुन्छ । प्रायः टेस्टहरू र्‍यान्डमली जुनसुकै वेला गर्न सकिन्छ । ..
बाबुकाजी पन्त उप–कार्यकारी निर्देशक राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड मानव जीवनमा दैनिक कार्य, शारीरिक क्रियाकलाप, शारीरिक विकासका लागि प्रशस्तै शक्ति आवश्यक पर्छ । यस्तो शक्ति दूधको उपभोगबाट सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ । बालक, वृद्ध व्यक्तिहरूले मात्र नभई युवाहरूले पनि नियमित रूपमा दूध तथा दुग्ध पदार्थ सेवन गर्दा शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस..
घरमा पकाएर बढी भएको मासु सञ्चय गर्दा अक्सिजन नभएको स्थान छनोट गर्नुपर्छ । अक्सिजनले मासुमा जीवाणुहरूलाई जीवित राख्छ । अक्सिजन नहुँदा पनि बाँच्न सक्ने जीवाणुले मासु बिगारेमा भने कुहिएर दुर्गन्धित हुने तथा अमिलो हुन सक्छ । त्यसैले मासु सञ्चय गर्दा शून्य डिग्री फरेनहाइट वा त्योभन्दा कम तापक्रममा राख्नुपर्छ । त्यसो गरियो भने मासुजन्..
घुर्ने रोगको समस्या छ ? जान्नुहोस् समाधान
डा. लक्ष्मी आवा छातीरोग विशेषज्ञ सुमेरु सिटी अस्पताल सबैभन्दा पहिला समस्या भएको व्यक्ति स्वयंले नियन्त्रणको कोसिस गर्नुपर्छ । शरीर मोटो भएका व्यक्तिले आफ्नो वजन कम गराउनु पर्छ । घुर्ने मानिस उत्तानो सुत्नु हुँदैन । शारीरिक व्यायाममा जोड दिनुपर्छ । यस्तो समस्या भएका मानिस कोल्टे परेर मात्रै सुत्ने बानी गर्दा पनि केही हदसम्म सुधार..
पोलेको जिब्रो शान्त गराउने घरेलु उपाय
अपनाउँदा शान्त बनाउन सकिन्छ बेकिङ सोडा बेकिङ सोडा छारीय प्रकृतिको हुने हुँदा जलेको वेला हुने एसिडिटीलाई कम गर्छ । त्यसकारण जिब्रो जल्नासाथ बेकिङ सोडापानीले मुख कुल्ला गर्नु राम्रो हुन्छ । आइस क्युब यदि जिब्रो पोल्यो भने मुखमा आइस क्युब लगाएर केही बेर चुस्ने । तर, आइस क्युब लगाउनुपहिले त्यसलाई झोल बनाउनुपर्छ । जमेकै अवस्थामा भए [..
सतिशकुमार देव सह–प्राध्यापक, क्लिनिकल फर्माकोलोजी,शिक्षण अस्पताल एन्टिबायोटिकको बढ्दो प्रयोग विश्वमै चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ । एन्टिबायोटिक औषधि शरीरमा भएका विभिन्न कीटाणुविरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता बढाउन प्रयोग गरिन्छ । एन्टिबायोटिकले शरीरमा हुने विभिन्न ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू हटाउन मद्दत गर्छ । तर, एन्टिबायोटिकको गलत प्रयो..
आदर्श प्रधान प्रशिक्षक, होलिस्टिक माइन्डस एन्ड लाइफ सेलिब्रेसन सेन्टर यस्त जीवनमा मानिसलाई नचाहेर पनि तनाव निम्तिने गर्छ । यस्तो तनाव नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने धेरैलाई चिन्ता छ । तनाव कम गर्ने विभिन्न माध्यममध्ये ध्यान अत्यन्त लाभदायक छ । ध्यानले तनाव विसर्जन मात्र होइन, शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूपमा स्वस्थ..
एजेन्सी जेठ १८ – यदि तपाईं पनि कुनै महिलालाई प्रपोज गर्ने सोच बनाइरहनुभएको छ र चाँडै नै ती महिलाको मन जित्न चाहनुहुन्छ भने त्योभन्दा पहिले यो खबर पढ्नुहोस् । कुनै पनि महिलालाई प्रपोज गर्नुभन्दा पहिले उनलाई कस्ता पुरुष मनपर्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । १. आफ्नै तारिफ गर्ने पुरुषः महिला यस्ता पुरुषलाई फिटिक्कै मन पराउँदैनन् [&hel..